Ukucoca kakuhle kumasango eMont-Orford Park
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguPauline
Wamkelekile kwiClairière yethu!
Siya kukwamkela kwinqanaba lomyezo wendlu yethu (umnyango ozimeleyo), kunye nayo yonke intuthuzelo efunekayo ukuchitha iintsuku zasehlotyeni ezintle kwindawo epholileyo, okanye ebusika ehlala ngesitofu se-pellet!
Ngekhitshi elincinci elivulekileyo kunye negumbi lokuhlambela labucala.
Kubathandi bendalo, kukho into enokuqwalaselwa, phakathi kwezityalo nezilwanyana! Kwaye sikubonelela ngemidlalo yebhodi, iincwadi, kunye ne-WiFi engenamkhawulo.
Nangona sihlala phezulu, uya kuba nakho konke ubumfihlo bakho. Kwaye ukuba unomdla malunga neprojekthi yethu (emalunga ne-permaculture kunye ne-agroecology) kuya kuluyolo lwethu ukuxoxa nawe. Sabelana ngendawo yethu kunye noGaïa (inja ye-collie yeminyaka emi-3 ubudala), iinkukhu ze-6 kunye neenyosi ezimbini (ngaphandle kokubala kuyo yonke indalo engqongileyo).
Emasangweni Mont-Orford Park (imizuzu ngaphantsi kwe-5 ukusuka Lac Frazer kunye Mont-Seychelles, 15 kuba iiholide ski) kunye nemizuzu ngaphantsi kwe-15 ukusuka Sherbrooke noMagogi, unako ukufumana uzinzo nice phakathi nendalo kunye nesixeko.
Après avoir voyagé en Asie, puis en Nouvelle-Zélande et en Europe, nous sommes de retour au Québec, et nouvellement installés dans la si belle région de l'Estrie. Au plaisir de croiser votre chemin ! Pauline et Julien
Siya kufumaneka kwaye singaze sibe kude kakhulu (kaninzi kwenye indawo egadini!). Nokuba ufuna ukuxoxa nathi okanye ngokuchaseneyo nobulumko bethu, siya kukwazi ukuziqhelanisa!